पोखरा रंगशालामा आजदेखि हक्की प्रतियोगिता - Safal Awaj Safal Awaj
पोखरा रंगशालामा आजदेखि हक्की प्रतियोगिता
असाेज १६ गते २०७८ मा प्रकाशित
पाेखरा, १६ असाेज । पोखरा हक्की क्लवको आयोजनामा पोखरा रंगशालामा आजदेखि हक्की प्रतियोगिता हुँदैछ । भिन्तुना हक्की टिमलाइ ग्रीन सिटि सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड तथा पोखरा प्रीफेब हाउसको साथ रहेकाे प्रा. लि. का अध्यक्ष राजु कायस्थले बताए ।
एक कार्यक्रमकाबिच कायस्थले क्लबको जर्सी सार्वजनिक गरेकाे बताइएकाे छ । प्रतियोगितामा भिन्तुना हक्की टिम, आयोजक पोखरा हक्की क्लवको तिन टिम सहित घारीपाटन हक्की क्लव, भेटरान्स हक्की क्लवको सहभागिता रहेकाे छ । आयोजकको टिममा भने दुई वटा महिला टिमको सहभागिता रहेकाे छ । महिला टिम समेत पुरुष टिमसंग भिड्नेछन् ।
लिग कम नक आउटका आधारमा खेलाइने उक्त प्रतियोगिताबाट नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट समेत गरिने भएको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा विजेता टिम तथा खेलाडीलाई कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम संयोजक राजन श्रेष्ठले बताए।